Traffic တိုးမြှင့်ခြင်း - ကြီးထွားရန်သက်သေပြမဟာဗျူဟာ ၂၅ ခု
ဤ 25 သက်သေပြမဟာဗျူဟာနှင့်အတူအသွားအလာတိုးမြှင့်
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 15, 2011 တနင်္ဂနွေ, ဒီဇင်ဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
အသွားအလာတိုးလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထပ်ခါထပ်ခါကြားရသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယာဉ်ကြောတိုးမြှင့်ခြင်းကိုမယုံသည်မဟုတ်၊ စျေးကွက်သမားများသည်အသွားအလာကိုမြှင့်တင်ရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားလေ့ရှိခြင်းကြောင့်သိုလှောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်သို့မဟုတ်သူတို့ရှိပြီးသားအသွားအလာကိုပြောင်းလဲရန်မေ့သွားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဖောက်သည်များအသွားအလာတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည့်သက်သေပြထားသောမဟာဗျူဟာ ၂၅ ခုကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းနှင့်ရလဒ်များကိုသူတို့ရရှိအောင်သေချာစေသည်။
အဘို့သင့် site ကိုအကောင်းဆုံး ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်။ သံသယမရှိဘဲ၊ ဒီဟာအသွားအလာကိုတိုးမြှင့်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ သင့်ကိုရှာဖွေနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်။ သင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများအသုံးပြုသောသော့ချက်စာလုံးများကိုနားလည်ပါ။
အသုံး အာရုံစူးစိုက်မှု - ဖမ်းဆောခေါင်းစဉ်များ။ လူတွေကသူတို့ဖတ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့ ၂၀% ကိုသာနှိပ်လိုက်တာသိလား။ (ငါ Vince Robisch ရဲ့စာမဖတ်မှီတိုင်အောင်ငါပြု၏ တိုင်) ။ အကြောင်းအရာကဲ့သို့သင်၏ခေါင်းစဉ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့်အသွားအလာကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ဆွဲဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ meta ဖော်ပြချက် သင့်ရဲ့စာမျက်နှာများနှင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များပေါ်တွင်။ Meta ဖော်ပြချက်များသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများတွင်မြင့်မားသောကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းကိုရရှိရန်အစွန်အဖျားဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အသွားအလာတိုးမြှင့်ရေးအတွက်အဓိကမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။
မင်းစစ်ဆေးပါ စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါ။ အချို့သောသူများသည်စာလုံးပေါင်းခြင်းနှင့်သဒ္ဒါနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တကယ်အမှားများကိုတွေ့မြင်ရပြီးအမှားတစ်ခုတွေ့သည်နှင့်ဆိုက်တစ်ခုမှထွက်ခွာကြသည်။ ငါမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် မှတ်ချက် တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုစာလုံးပေါင်းအမှားကိုသတင်းပို့ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်စာမျက်နှာကိုငါမသိခဲ့ဘူး။
ဘလော့ဂ် Start မကြာခဏနှင့်တသမတ်တည်း။ သင်စာရေးလေလေ၊ သင်၏အကြောင်းအရာကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကရှာရန်အခွင့်အရေးပိုရလေလေဖြစ်သည်။ သင် ပို၍ တသမတ်တည်းကျလေလေအကြောင်းအရာအသစ်ကိုရှာဖွေရန်လူများများပြန်လာလေလေဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ အရင်းအမြစ်များ။ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသည်ဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ မကောင်းသောဒီဇိုင်းသည်ဖောက်သည်များကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ ထူးခြားသောအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သောအလွန်ကောင်းသောဆိုဒ်များစွာသည်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သူတို့ကသာမန်ရုပ်ဆိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြီးကျယ်သောဒီဇိုင်းများကသင့်အားထောင်ပေါင်းများစွာမကျသင့်ပါ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအပြင်အဆင်များနှင့်အလှတရားများကိုဒေါ်လာ ၂၀ ထက်မကသောဈေးပေါသောဆိုဒ်များများစွာရှိသည်။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုထည့်ပါ သို့မဟုတ်သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ လူတွေကစျေးကွက်ရှာဖွေရေး drivel ကိုမကြိုက်ကြဘူး၊ သူတို့ကတကယ့်လူတစ်ယောက်ဆီကစာတစ်စောင်ကိုဖတ်နေသလိုပဲ။ လူများများသည်သင်၏ဆိုဒ် (သို့) ဘလော့ဂ်တွင်လူအများဆွဲဆောင်ခံရလိမ့်မည်။ အမည်မသိသောအကြောင်းအရာရေးသားသူနှင့်သူတို့မဆက်ဆံပါကလူအများအပြားကသင်၏ဘလော့ဂ်သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်။ အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ် Google Profiles နှင့် rel tag များ သင့်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုလည်းဓာတ်ပုံများတင်ရန်!
သင့်ရဲ့ထည့်ပါ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ် သင့်ဆိုဒ်သို့ တနည်းကား၊ သူတို့၏အမှတ်အသားကိုဖုံးကွယ်ထားသူကိုမယုံကြည်ထိုက်သူဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ လူတွေကိုသင့်ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပေးပါ။ ပြီးတော့သူတို့လာတဲ့အခါလည်ပတ်မှုတွေကိုသင်အံ့ may မိမှာပါ။ ထို့အပြင်သင်၏ site ပေါ်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာတစ်ခုထည့်ခြင်းသည်ဒေသခံရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်တွေ့နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုပိုကောင်းစေနိုင်သည်။
a ထည့်သွင်းပါ သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာ (သို့) ဘလော့ဂ်ကိုလက်ကိုင်ဖုန်းအပြင်အဆင်။ စမတ်ဖုန်းများသည်လူကြိုက်များလာသည်။ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည်သင်၏ site ကိုသူတို့၏စက်ပစ္စည်းအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်ကိုတွေ့သောအခါသူတို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်။ မိုဘိုင်းအသွားအလာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခြုံငုံအသွားအလာအဖြစ်ကောင်းစွာတိုးပွားလာလိမ့်မည်!
သင်၏လူမှုမီဒီယာတည်ရှိမှုကိုမြှင့်တင်ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုကြိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်နောက်လိုက်လိုက်ရင်သင့်ရဲ့ကွန်ယက်ဆီကိုသက်ဆိုင်ရာအလားအလာရှိတဲ့ visit ည့်သည်ကိုထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ သင်၏ကွန်ယက်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ၊ သင်၏လူမှုကွန်ယက်မှအသွားအလာပမာဏတိုးလာလိမ့်မည်။ သင်၏သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်အခါအားလျော်စွာသင်မွမ်းမံနိုင်ရန်အတွက်သင်နှင့်သင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်တောင်းခံပါ။
သတင်းလွှာထည့်ပါ! visitors ည့်သည်များစွာသည်သူတို့လိုအပ်သည်ကိုမတွေ့ရပါ။ သို့သော် အကယ်၍ ဆိုက်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်နှင့်သက်ဆိုင်လျှင်ဆိုလျှင်သူတို့သည်သင့်ကိုလူမှုမီဒီယာများမှလာလိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်၏သတင်းလွှာကိုပင်စာရင်းသွင်းလိမ့်မည်။ သင်၏ဆိုဒ်သို့ပြန်ချိတ်ဆက်သောအခါသင်၏သတင်းလွှာသည်အသွားအလာကိုချက်ချင်းတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ အီးမေးလ်ပို့ရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးအမြတ်ရှိသည်နှင့်အသွားအလာအပေါ်ပိုကောင်းတဲ့ပြန်လာရှိပါတယ်!
သင့်ရဲ့လက်မှတ်ပေါင်းသို့လင့်များထည့်ပါ နှင့်ထွက်သွားတိုင်းအီးမေးလ်များမှာသူတို့ကိုဖြည့်စွက်။ သင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အာရုံကိုဖမ်းယူမည့်အရာကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိပါ။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ သင်အီးမေးလ်ပို့သူနှင့်သင်ဆက်ဆံရေးရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အသုံး ထိရောက်သောလမ်းညွှန်မီနူးများ။ ထိရောက်သောလမ်းညွှန်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူစေသည်။ ထင်ရှားသော navigation element များကိုနေရာချခြင်းသည်သင်၏ site ပေါ်တွင်သော့ချက် element များမှရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုလည်းအသိပေးလိမ့်မည်။
ပေး အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သောကိရိယာများ ဂဏန်းတွက်စက်တွေလို၊ စစ်တမ်းများနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများ။ လူတွေကသင်ထင်သလောက်စာမဖတ်တတ်ကြဘူး။ လူအများစုကသူတို့လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့အတွက်သင့်တော်တဲ့ကိရိယာကိုရှာနေကြတယ်။ site တစ်ခုပေါ်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောဂဏန်းတွက်စက်သည်လူများကိုထပ်ခါထပ်ခါပြန်လာစေလိမ့်မည်။
ပုံရိပ်များ၊ ဇယားများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအသုံးချပါ။ ပုံရိပ်နှင့်ဇယားကွက်များသည်လူတို့အားအချက်အလက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်မှတ်မိစေရန်ကူညီရုံသာမက infographics ကဲ့သို့သောမဟာဗျူဟာများက၎င်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်နှင့်၎င်းကိုပေးပို့ရန်လွယ်ကူစေသည်။ လူမှုကွန်ရက်အများစုသည် Facebook ကဲ့သို့ပုံရိပ်အကြိုမြင်ကွင်းများကိုထည့်သွင်းထားသည်။
သည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များမြှင့်တင်ရန် နှင့်သူတို့၏ဘလော့ဂ်များ။ သင်၏ရွယ်တူချင်းများကိုဖော်ပြခြင်းသည်သူတို့၏အာရုံကိုဖမ်းယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာဟာထိုက်တန်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကပရိသတ်ကိုဝေမျှပေးလိမ့်မယ်။ ထိုခေါင်းဆောင်အများစုသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားသောပရိသတ်များရှိသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုပြောပြတဲ့အခါမကြာခဏဆိုသလို၊ သူတို့ site ကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့နဲ့ပရိသတ်ကိုလူမှုရေးအရဒီ link ကိုမျှဝေဖို့ကျွန်တော်ဖိအားပေးခံရတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါအဲဒီအကြောင်း post တောင်မျှဝေမယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဆိုဒ်မှသူတို့၏လမ်းကြောင်းများသို့ဆက်သွယ်မှုများကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
လူမှုခလုတ်များကိုထည့်ပါ နှင့် လူမှုရေး bookmarking tools များ ကဲ့သို့ တွစ်တာနှုတ်၊ စကားပြောနိုင်အောင် Facebook၊ LinkedIn၊ Google နှင့် StumbleUpon ။ ဒါကပရိသတ်ကိုမင်းကိုမင်းကိုအားပေးစေတယ်။ သင်၏ကွန်ယက်ထဲမှတစ်စုံတစ် ဦး ကအကြောင်းအရာကိုအကြံပေးသောအခါ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်များစွာဆိုလိုသည်။ လူမှုရေးဝေမျှခြင်းကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မြင်ဖူးသမျှအသွားအလာအများဆုံးတိုးပွားစေသည်။
ပရိုမိုးရှင်းအတွက်ပေးဆောင်ပါ။ အကယ်၍ မင်းဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောရာထူးတစ်ခုသို့အားစိုက်ထုတ်ပြီးခဲ့လျှင်မင်းဒါကိုမြှင့်တင်ရန်သင်ဘာကြောင့်မပေးနိုင်တာလဲ။ သင်၏ဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့လူမှုဆက်သွယ်ရေးလင့်များရှိပါကသင်၏လူမှုရေးခလုတ်များမှ 1 နှင့် 0's ကိုမြင်သောအခါ some ည့်သည်အချို့သည်ရှက်သွားလိမ့်မည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအနည်းငယ်မျှသာသို့မဟုတ်ဘာမျှမလုပ်ဘဲ +1 ပြန်လည် retweet လုပ်ရန်လူများစွာတို့သည်ကွန်ယက်များစွာရှိသည်။
အကြောင်းအရာအဟောင်းကိုတက် Spruce။ သင်၏အကြောင်းအရာသည်အဟောင်းဖြစ်နေသောကြောင့်၎င်းသည်ခေတ်ကုန်သွားပြီဟုမဆိုလိုပါ။ URl ဆောက်လုပ်ရေးရက်စွဲများနှင့်ဆောင်းပါးများတွင်တင်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ သင်၏ပရိသတ်သည်သင်တက်ကြွနေသည်ဟုထင်ပြီးသင်နှင့်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများသည်သက်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသေချာစေလိုသည်။ တစ်လတစ်ကြိမ်ကဲ့သို့သောကိရိယာတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ကောင်းစွာအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုစစ်ဆေးပါ Semrush စာမျက်နှာပေါ်ရှိသော့ချက်စာလုံးများအတွက်အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်၊ အကြောင်းအရာနှင့် meta data ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါ။
နှင့်အတူအသွားအလာ၏ကြီးမားသော volumes ကိုမောင်းနှင်ပါ ပြိုင်ပွဲ, ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ဆုလာဘ် ကဲ့သို့ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနည်းဗျူဟာတွေဟာအမြဲတမ်းအသင့်တော်ဆုံး visitors ည့်သည်တွေကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါဘူး။
လျှော့တွက်မထားပါနဲ့ ရိုးရာမီဒီယာ၏စွမ်းရည်အထူးသဖြင့်နည်းပညာနယ်ပယ်မှာသင်အလုပ်မလုပ်ရင် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မဂ္ဂဇင်းများ၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာတင်ပြချက်များ၊ အရောင်းအ ၀ ယ်၊ စီးပွားရေးကတ်များ၊ ငွေတောင်းခံလွှာများပါ ၀ င်သည်။ သင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဘလော့ဂ်နှင့်လူမှုရေးဆိုဒ်များကိုလူများအား URl ဖြင့်ပံ့ပိုးပေးခြင်းသည်အသွားအလာကိုတိုးစေလိမ့်မည်။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး လူတွေဟာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိပြီးသူတို့မှာမင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြဖို့အချိန်နဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအသွားအလာအချို့မှာကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းရေးသားခဲ့သည့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားလူတွေ့မေးမြန်းခဲ့သောအဓိကမီဒီယာကုမ္ပဏီများမှရိုးရာသတင်းထောက်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ content တွေကိုဖြန့်ဝေ စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများ on LinkedIn တို့ နှင့်ဖိုရမ်များ။ အချို့လူများကအချို့သောအုပ်စုများမှထိုအချက်ကို SPAM ပေးသည်၊ သို့သော်အချို့သည်အလွန်တက်ကြွစွာရှိသည်။ လူများကသင်အကူအညီပေးသည်ကိုသိပြီးသင်၏ပစ္စည်းများကိုသိသောအခါသူတို့သည်သင်၏ site သို့ပြန်လာလိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင်၏ဆွေးနွေးမှုများကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်လည်းတွေ့နိုင်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများအသွားအလာတိုးမြှင့်ကူညီသကဲ့သို့နည်းတူ သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း မေးခွန်းနှင့်အဖြေ ဆိုဒ်များ။ အချို့ကသင့်တုန့်ပြန်မှုများတွင် link တစ်ခုကိုကိုးကားရန်ပင်ခွင့်ပြုသည်။ Q & A ဆိုဒ်များသည်လူကြိုက်များလျက်ရှိသော်လည်းအနည်းငယ်နှေးကွေးနေပုံရသည်။ သို့သော်ထိုနေရာသည်ရှေးရှေးအဖြေများရှာဖွေနေသည့်နေရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သော link တစ်ခုရှိပါက၎င်းတို့ကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့ပြန်ပို့ပေးလိမ့်မည်။
ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူမှုစောင့်ကြည့်ခြင်း သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ (သို့) ဘလော့ဂ်ကကူညီနိုင်သည့်ဆွေးနွေးမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်။ ပြိုင်ဘက်အမည်များ၊ ထုတ်ကုန်အမည်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများအတွက်သင်သတိပေးချက်များရှိသလား။ ဤအရာများကိုပုံမှန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်သင့်အားလာရောက်လည်ပတ်သူများပြားလှသောပရိသတ်နှင့်သင့်အားဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ သင်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည့်အခါ၎င်းသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ယက်နှင့်အခွင့်အာဏာကိုလည်းတည်ဆောက်လိမ့်မည်။
link-baiting နေဆဲအသွားအလာတိုးမြှင့်ဖို့အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုအရ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဂျာနယ်ဆောင်းပါး ၅ မျိုးသည် backlinks များစွာနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည်သတင်းများ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ရင်းမြစ်နှင့်ဟာသတို့ဖြစ်သည်။ ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်သည်ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်အရင်းအမြစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
WordPress Backup အစီအစဉ်…တစ်ခုရှိလား။
3:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 19 တွင်
ငါသဘောတူတယ် ငါ "အမည်မသိအကြောင်းအရာစာရေးဆရာများ" မခံမရပ်နိုင်။ ^ - ^
စက်တင်ဘာ 24, 2013 မှာ 2: 16 AM
ကြီးမြတ်စာရင်း။ ထပ်ထည့်ရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်လှပသောရုပ်ပုံများကိုသုံးပြီး Pinterest၊ Facebook၊ Instagram နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ချိတ်ဆက်။ ဝေမျှသည်။ ကျွန်ုပ်အကြောင်းအရာ၏တင်ဆက်မှုဗားရှင်းကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကို SlideShare.net, Scribd နှင့်အခြားဖိုင်ဝေမျှသည့်ဆိုဒ်များတွင်မျှဝေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်နှင့်အသွားအလာတိုးပွားစေရန်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။